अमेरिकामा हुँदा रवि लामिछानेको चर्चित नेपाली हिरोईन करिश्मा मानन्धरसंग पनि सम्बन्ध रहेको खुलासा ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं। चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने र उनकी पूर्वपत्नी इशा लामिछानेको विवाद अझै पनि सेलाएको छैन । यसै सिलसिलामा रवि लामिछानेसँगको सम्बन्धबारे अर्को सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ । एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै पूर्वपत्नी इशाले एक अंशमा भनेकी छिन्, ‘म अमेरिका गएपछि रविजी ति महिलासँग टाढिनुभयो ।
दुवैजना विवाहित भएकोले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सजिलो पनि थिएन उहाँहरुलाई । म अमेरिका गएलगत्तै ती महिला रविजीसँग रिसाएर नेपाल फर्किनुभएछ ।
जहान–परिवारवाली प्रतिष्ठित (अहिले ‘प्रतिष्ठित’ हटाएको) व्यक्ति भएको हुनाले म ती महिलाको नाम लिन सक्दिनँ ।’ इशाले नेपालकी प्रतिष्ठित र जहान–परिवारवाली भनेर कसलाई भनेकी हुन् त ? उनले यति सूचनाबाहिर ल्याएपछि मिडिया क्षेत्रमा ति महिला फिल्म नायिका करिश्मा मानन्धर हुन् भनेर चर्चा हुन थाल्यो ।
तर कसैको नाम लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु शोभनीय हुँदैन । सम्बन्ध रहेकै भए पनि निजी मामिला उचालेर कसैको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु अझै असभ्य हुन सक्छ । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, पत्रकार ऋषि धमलाले तीन वर्षअगाडि आफ्नो कार्यक्रम ‘धमलाको हमला’मा यहि कुरा उठाएका रहेछन । पत्रकार धमलाले सदावहार नायिका करिष्मामाथी हमला गर्दै सोधेका केहि प्रश्नहरु यस्ता छन:
ऋषि धमलाको प्रहार हेर्नुहोस :
तिन वर्ष अगाडी धमलाको हमलामा ऋषि धमलाले करिश्मा मानन्धरसंग गरिएको कुराकानीको पुरा भिडियो हेर्नुहोस:
४५ दिन भित्र ज्योतिष शास्त्रको विधा प्रयोग गरी भाग्य बदल्ने ज्योतिषी भन्छन : रबि लामिछाने प्रधानमन्त्रि र राजतन्त्र फर्किने ठोकुवा (भिडियो)
काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा ज्योतिष शास्त्रलाइ आधार मान्दै आफ्नो आफ्नो टिप्पणी राख्ने ज्योतिषहरुको होडबाजी चलिरहेको छ। कति कुराहरु मिलेका पनि छन भने कति नमिलेका पनि देखिन्छन। केहि समय देखी राजतन्त्र नेपालमा फेरी आउछ देखि रबि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुने पक्का सम्मको भाबिश्यवानी गर्ने एक ज्योतिष युटुबमा भाइरल छन। अर्जुन छेत्री नाम गरेका एक ज्योतिष जसले फोटो हेरेरै हरेकको भबिष्यवाणी गरिरहेका छन।
उनी भन्छन मलाई ज्योतिष शास्त्र संग जोडिन र म बाट जानकारी लिनको लागी अमेरिका बाट न्यासा जस्तो कम्पनी समेत ले अफर गर्यो तर म भने नेपालमै रहेर नेपाली हरुको सेवा गर्छु । उनले भनेका कुरा हरु धेरै छन् सामाजिक संजालमा टिका टिपणी हरु धेरै हुन् थाले पछी उनि आफै फेसबुक लाइवमै आएर प्रस्ट पार्दै उनले जानकारी दिएका छन् ।
बाकी भिडियोमा हेर्नुहोला उनले गरेको भविष्यवाणीलाइ जस्ताको तस्तै। हेर्नुहोस भिडियो:
विकास र समृद्धिमा आफ्नो सकारात्मक भूमिका रहन्छ ः पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव